U-qalmitaanka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Eligibility
Waxaad heli kartaa kaalmooyin ka badan kuwii hore ee Medicare oo keliya.
Yaa u qalma Medicare?
Qorshayaasheena Faa'idada Medicare waxaa heli kara qof kasta oo u qalma Medicare -ka Asalka ah. Dadka badankoodu waxay xaq u leeyihiin inay helaan dheefaha Medicare haddii ay buuxiyaan mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
yihiin ugu yaraan 65 sano
aad ka yar tahay 65 sano jir kuna nool naafo
yihiin da 'kasta oo leh Cudurka Kelyaha-dhamaadka (kelyaha oo joogto ah oo u baahan sifayn ama tallaal, mararka qaarkood loo yaqaan ESRD)
Si aad ugu qalanto Medicare, shaqsigu waa inuu ahaadaa muwaadin Maraykan ah ama degane sharci ah. Deganeyaasha sharciga ah waa inay ku noolaayeen Mareykanka ugu yaraan 5 sano kahor inta aysan codsan Medicare.
Haddii aad sidoo kale u qalanto Apple Health (Medicaid), waxaa laga yaabaa inaad u qalanto kanaga Qorshaha Labaad ee Faa'idada Medicare.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan u -qalmitaanka iyo qorshaha kugu habboon, la hadal mid ka mid ah khubaradayada. Waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino helitaanka caymis ku habboon baahiyahaaga. Khubaradayada maxalliga ah ayaa laga heli karaa 1-800-944-1247 (TTY: 711).
Hadda uma qalmo Medicare? Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto nooc kale oo ah qorshe caafimaad, sida tanyada oo kale Cascade Select Plan.
Waxaan ku cusub ahay Medicare. Goormaan codsan karaa?
➜ Muddada Diiwaangelinta Hore (IEP)
Tani waa marka dadka intooda badani iska qoraan Medicare.
Xidhan 65? Waxaad iska qori kartaa toddobada bilood ee ku xeeran dhalashadaada. Tan waxaa ku jira bisha dhalashadaada, oo lagu daray saddexda bilood ee ka horreeya iyo saddex bilood ka dib dhalashadaada.
Ma u qalmaa naafanimada? Waxaad isqori kartaa inta lagu jiro toddobada bilood ee ku xeeran 25 -ka bisha aad heshid dheefaha naafada.
Xusuusnow: Haddii aadan iska qorin Medicare marka ugu horreysa ee aad xaq u yeelato, waxaa laga yaabaa in lagaa qaado ganaaxa diiwaangelinta ee Qaybta B marka aad iska diiwaangeliso caymiska.
➜ Muddada Doorashada Guud (GEP)
GEP -gu wuxuu dhacaa sanad walba laga bilaabo Janaayo 1 ilaa 31 Maarso. Haddii aadan iska qorin Medicare inta lagu jiro Xilliga Diiwaangelinta Bilowga ah, waxaad isqori kartaa inta lagu jiro GEP -ga. Waxaa laga yaabaa in lagugu soo dallaco qaddar sare ama ganaax diiwaangelin dambe haddii aad sugto ilaa GEP -ga si aad isaga qorto Medicare -ka Asalka ah.
Kadib markaad isqorto Qaybaha Medicare A iyo / ama B, waxaad dooran kartaa inaad codsato caymis dheeri ah. Haddii aad isqorto labada Qeyb A iyo Qeybta B, waxaad dooran kartaa inaad ku biirto Medicare Advantage (Qeybta C) ama Medicare Rijeetada Daawada (Qeybta D) ee udhaxeysa Abriil 1 iyo Juun 30 isla sanadkaas. Waxa kale oo aad iska qori kartaa qorshaha Qeybta D haddii aad iska qorto Medicare Qaybta B oo keliya inta lagu jiro Muddada Doorashada Guud.
Hore ayaan uga diiwaangashanaa Medicare. Goorma ayaan beddeli karaa qorshahayga?
➜ Muddada Isqorista Sannadlaha ah (AEP)
Xubnaha Medicare waxay kaliya beddeli karaan caymiska inta lagu jiro AEP, inta u dhaxaysa Oktoobar 15 iyo December 7 sanadkasta.
Inta lagu jiro AEP, waxaad beddeli kartaa caymiskaaga iyada oo aan lahayn xannibaadyo (tusaale ahaan, ku dar ama ka saar caymiska daawada laguu qoray ama ku biir qorshe kale).
➜ Muddada Isqorista Gaarka ah (SEP)
Duruufaha qaarkood ee nolosha beddelaya ayaa abuuri kara baahida loo qabo in la beddelo caymiska (tusaale, haddii aad hawlgab noqoto, aadan caymis ka haysan loo-shaqeeye, ka guurto aagga adeegga, ama aad u qalanto gargaarka caafimaadka gobolka). Xeerarka ku saabsan goorta aad wax ka beddeli karto iyo nooca isbeddellada aad samayn karto way ku kala duwan yihiin SEP kasta.
Haddii aad u qalanto inaad beddesho caymiska, waxaad ku laaban kartaa Medicare -ka Asalka ah, ku dar daboolista Daawada Dawada ee Medicare (Qaybta D), ama ku biirto Qorshaha Faa'idada Medicare.
Wax badan ka baro oo codso
Way fududahay in lagu qoro mid ka mid ah qorshayaasheena Faa'idada Medicare taleefanka, internetka, ama boostada. Khubaradayada Medicare ayaa sidoo kale diyaar u ah inay Isqortaan si ay u helaan caymis dhammaystiran hal kaar, oo lagu daray dheefo dheeraad ah, wax yar oo aan lahayn kharash dheeraad ah bishiiba.